သတင်း | Weierxin Safe Locker ထုတ်လုပ်သူ
ပြည်တွင်းစျေးကွက်တွင်အရောင်းဆိုင် 1000 ကျော်နှင့်5သန်းကျော်သစ္စာရှိဖောက်သည်5သန်းကျော်ရှိသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ဒီဇိုင်းနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွင်ပါ0င်သောအတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။
ပျော်ရွှင်သောအမျိုးသမီးများနေ့ Foshan Weierxin Safe Factory
Foshan Weierxin ကို Safe စက်ရုံ မှစ. Kung-Hei ဆီ Choi စေရန်လူတိုင်း
"Guangdong ကို" တရုတ်ပရိဘောဂတွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ Guangdong ပရိဘောဂတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ Foshan သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏ခေတ်သစ်ပရိဘောဂထုတ်လုပ်မှု၏မွေးရပ်မြေဖြစ်သော, တစ်ချိန်တည်းမှာပင် "တရုတ်ပရိဘောဂလုပ်ငန်းများကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြပွဲကိုတီထွင်ခြင်း" အဖြစ်ဂုဏ်ပြုသော 41 ကြိမ်မြောက် International Longjia ပြပွဲသည် Fosjiang မှဒီဇင်ဘာ 13 ရက်မှ 16 ရက်အထိ Fosjiang တွင် Fosjiang တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ & မျှဝေခြင်းနှင့်သာယာဝပြောတဲ့ကုန်သွယ်ရေးပြပွဲကသင့်ကိုပိုကြီးတဲ့, ပိုကောင်းတဲ့,1. Oxpriperbiation: စက်တင်ဘာ 13 - 16, 20212. ရခြင်း - Mayo စင်တာFoshan Weierxin Safe Co. , Ltd သည်ဤပြပွဲအတွက် Booth တွင် 1 ခန်းရှိသည်။ ငါတို့ဖောက်သည်တွေအတွက်ပူရောင်းတဲ့မော်ဒယ်တွေကိုထုတ်ယူခဲ့တယ်။
47th Ciff Guangzhou 2021 •မတ်လ 28-31
47 ကြိမ်မြောက်တရုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပရိဘောဂတရားမျှတမှု, တရုတ်နိုင်ငံတွင်အဓိကပရိဘောဂဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းသည်ဒီဇိုင်း၏တန်ဖိုးကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဂိမ်း၏စည်းမျဉ်းအသစ်များနှင့်အဆက်အသွယ်အသစ်တစ်ခုကိုတီထွင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့် 47 ကြိမ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပရိဘောဂCiff Guangzhou 2021 ကိုထုတ်ကုန်ကဏ္ finw မှဖွဲ့စည်းထားသောအဆင့်နှစ်ဆင့်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပထမအကြိမ်မတ်လ 18 ရက်မှ 21 ရက်အထိအိမ်သုံးပရိဘောဂ, အိမ်သုံးအထည်အလိပ်, ဒုတိယအချက်မှာမတ်လတွင်မတ်လတွင်မတ်လတွင်မတ်လတွင်ပရိဘောဂပရိဘောဂများ, စီးပွားဖြစ်ပရိဘောဂများ, စီးပွားဖြစ်ပရိဘောဂများ, ဟိုတယ်ပရိဘောဂစက်များနှင့်ပရိဘောဂစက်များနှင့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ။ Guangzhou ရှိစတုရန်းမီတာ 750,000 အကျယ်အ0င်စုစုပေါင်း 750,000 ကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်တရုတ်ကွမ်ကျိုးတွင်တရုတ်တင်သွင်းမှုနှင့်တင်ပို့မှုပြပွဲ 7000,000 နှင့်ကုန်သွယ်ရေး visitors ည့်သည် 300,000 ကိုလက်ခံလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။Office တွင်ရည်ရွယ်ထားသောကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးကုန်သွယ်မှုပြပွဲသည်ဒုတိယအဆင့်တွင်ဒုတိယအဆင့်တွင်ဒုတိယအဆင့်တွင်ခေါင်းစဉ်များ, အလုပ်ခွင်အတွက်စနစ်များ, အလုပ်ခွင်အတွက်စနစ်များနှင့်အဖြေများအတွက်ပရိဘောဂများ, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏လိုအပ်ချက်များအတွက်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, CIFM / Interzum Guangzhou 2021 သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိထိပ်တန်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။1. အကျဉ်းသား - မတ်လ 28 - 31, 20212. တရုတ်နိုင်ငံသည်တရားမျှတသောအဆောက်အအုံများတင်သွင်းမှုနှင့်တင်ပို့ခြင်းFoshan Weierxin Safe Co. , Ltd သည်ယခုနှစ်ပြပွဲတွင်ပါ0င်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်သစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားယူဆောင်လာခဲ့သည်။2021/03/28